Mpanakanto maro kokoa no miditra hanome voninahitra ny angano Stan Lee | Famoronana an-tserasera
Roa andro lasa izay dia nahare ny vaovao mampalahelo momba ny fahafatesan'i Stan Lee isika, ny angano ny tantara an-tsary ary iza no mahalala hanome fiainana ny endri-tsoratra malaza toa an'i Spiderman, The Fantastic 4 na ilay Incredible Hulk. Betsaka ireo maherifo nipoitra tamin'ny faniriany hitondra ny tantara an-tsary ho an'ny olona an-tapitrisany.
Ary nanomboka omaly, rehefa namoaka sanganasan'ny artista isan-karazany izahay, tsy nijanona izy ireo mahazo amin'ny tambajotram-pifandraisana ny fanomezam-boninahitra amina sary an'habakabaka amina sary an-tsary sy mpanao sariitatra am-polony hilaza ny veloma ny tantara an-tsary toa an'i Stan Lee.
Avy amin'izy rehetra ny loko sy ny fikasana no fanomezam-boninahitra notontosain'ny mpanakanto marobe.
Avy amin'ny sasany manokana sy sariaka kokoa, saika hyperrealism amin'ny asa hafa kalitao goavambe izay afaka mitazona io endrika mampiavaka an'i Stan Lee io.
Betsaka amin'izy ireo no mitondra ny azy rehetra mahery fo namboarina mba hanakaiky ny tenan'i Stan Lee, raha ny hafa kosa mampiseho ny fomba nanatonana ny vadiny, izay nandao antsika koa fotoana vitsy lasa izay.
Fotoana kely hahatsiarovana ny zava-drehetra izany lova navelan'i Stan Lee izany ka maro no manaraka ny tantaran'izy ireo ary afaka manome aingam-panahy ho antsika miaraka amina litera vaovao tonga amin'ny taona ho avy.
Mamela andian-tsary sy sary maromaro izahay mba tsy hanadino an'i Stan Lee sy ny azy hafanam-po amin'ny fitantarana tantara an'ny maherifo. Betsaka tamin'izy ireo no nalaina tamin'ny efijery lehibe mba ho tafiditra ao amin'ny sinema ankehitriny.
Un Spiderman ikonika afaka mipetraka mandohalika mba hahatadidy ny mpamorona azy tamina asa manaitra izay manandrana taratry ny alahelo roa andro lasa izay.
Una Gaga izay malemy rehefa resy amin'ny olona ambony indrindra izay mpandray anjara tamin'ny kolontsaina pop an'ity fiarahamonina ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fanomezam-boninahitra mpanakanto bebe kokoa an'i Stan Lee, tantara an-tsary
Squoosh dia rindrambaiko Google vaovao hanonganana sary nefa tsy hamoy kalitao